गोविन्द केसीले सोमबार अवकास पाउने : आन्दोलन जारी राख्ने – Khabar Silo
काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै पटक पटक अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीले सरकारी सेवाबाट उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने भएका छन्।
एक महिनादेखि रिक्त रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि डा. भगवान कोइराला, डा. धर्मकान्त बास्कोटा र डा. चन्द्रमणि पौडेलको नाम सिफारिस भएको छ।
काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिका-४ का वडाध्यक्ष पुष्कर खड्का मानव बेचविखनको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। खड्काविरूद्ध एक महिलाले उजुरी दिएपछि माघ १० गते प्रहरीले उनीसहित काठमाडौंका ब्रिजगोपाल श्रेष्ठ र भारत मोतिहारीका नवल ठाकुरलाई ललितपुरबाट पक्राउ गरेको थियो। ‘अदालतबाट ८ दिनको म्याद थपेर तीनै जनामाथि मानव बेचविखन तथा ओसारपसार मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ,’ महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरकी प्रवक्ता […]
भव्य भ्रमण : उत्कृष्ट सन्देश